सच्चा कांग्रेसीले सोचौँ, वीपीको नाम बजाएर कति वर्ष खाने ? « NBC KHABAR
देशको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकबारे नबोल्न मनले दिएन । प्रजातन्त्र प्राप्ती र लोकन्त्र प्राप्तीका लागि संघर्ष त्याग बलिदान गरेका अनगिन्ती दृष्टान्त र पात्रहरुले मारीएको नेपाली कांग्रेस यति भद्रगोल अवस्थामा आइपुग्ला भन्ने कसैले सोेचेका थिएनन् ।
विश्लेषकहरुले जस्तो अर्थ बुझ्ने शब्दकोश पल्टाउनु पर्ने गरी नभई सरल र आम मानिसले बुझ्ने गरी केही सीधा कुरा राख्न चाहान्छु । पार्टीको संसोधित विधान मस्यौदा मंगलबार पनि पेश नभएपछि महासमिति बैठक एजेण्डा बिहिन छ, भन्दा फरक पर्दैन । सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलको दोहोरी हेरेरै कांग्रेसले लामो समय बितायो ।
निर्वाचन परीणामबाट खासै शिक्षा लिन चाहेन । फलस्वरुप देश लगभग प्रतिपक्ष बिहिन अवस्थामा गुज्रिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको काम मिडिया र सामाजिक सञ्जालले जिम्मा लिएको जस्तो भएको छ । भिजन भएका युवा तथा इच्छाशक्ति भएको कांग्रेस नेताहरु पार्टी सभापति र अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलेको घेरा तोड्न नसक्ने अवस्थामा छन्, फलस्वरुप लामो लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको कांग्रेस गुण्डा, ठेकेदार, विचौलियाहरुको पहूँचमा छ ।
जसलाई जति तीतो लागे पनि लागोस् तर हिजो सत्तामा छँदा चुनावको टिकट विक्री गर्ने नेतृत्व यही छ । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा पैसा लिने कांग्रेसी मन्त्रीहरु यतिखेर २ पेग लडाइबरी वीपीको नाम भजाइरहेका छन् । नाम वीपी को लिने, भित्तामा वीपीको तस्वीर टाँस्ने अनि कर्मचारी सरुवामा, राजनीतिक नियुक्तिमा, राजदुत नियुक्तिमा र सरुवा बढुवामा ठाडै पैसाको डिल गरेर तलदेखि माथिसम्म बुझाउने कांग्रेसी नेताहरुको बोलवाल रहेसम्म कांग्रेस उभो लाग्दैन ।
विधान पनि संसोधन गर्नुहोला, गुट उपगुटका समस्या पनि समाधान गर्नुहोला तर वीपीको सपनाका नाममा आफ्नै सपना पुरा गरेका केही कांग्रेसी पूर्व मन्त्रीहरुको चर्तिकला थाहा पाउँदा पनि चुपचाप लागेर बस्नु हुने सभापति एंव तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कति पैसा बुझाइन्थ्यो भनेर सोध्न सक्ने मुटु भएको नेताले मात्र वीपीको नाम लिइयोस् ।
कुरा आदर्शका गर्ने, उठकस गुण्डा नाइके र ठेक्का पट्टा हत्याउने विचौलियासँग गर्नेहरुले गणेशमान सिंहको फोटो भित्तामा टाँस्न सुहाउँदैन । कांगेस भित्र इमान्दार, क्षमतावानहरुको कमी छैन । केही महिनामै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा देखिने गरी जुन सुधार र कार्यक्रमहरु गगन थापाले ल्याए सम्भवत नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यती भिजनरी मन्त्री यो मु्लुकले पाएको थिएन । यस्ता असल र सम्भावना बोकेका पात्रको प्रशंसा गर्न कन्जुस्याँई गर्नु पनि हुँदैन ।
तर अन्त्रोझत र हनुमान बनेर आजीवन जय गान गाउन जरुरी छैन । गलत गरेका दिन खरो र दरो आलोचना गर्न सक्ने मुुटु नभएकाहरुले तारिफ पनि गर्नु हुँदैन । भ्रष्टहरुको कारण विश्व प्रकाश शर्माहरुले चुनाव हारे, उदय शम्शेर जस्ता पढेलेखेका नयाँ पुस्ताका खम्बाहरुले चुनाव हारे ।
पार्टी त यस्ता होनाहारहरुले पो चलाउने । बुढो हुनु अपराध होइन तर त्यस्ता धेरै कुराहरु छन् जसमा उमेरको महत्व हुन्छ । प्रजातन्त्रका लागि लोकतन्त्रका लागि गणतन्त्रका लागि त्यत्रो संघर्ष गर्न भयो शेर बहादुर देउवाले । के अब यो बुढेसकालमा लज्जास्पद भएर पद छोड्ने त ?
घात अन्तरर्घात, गुट उपगुट, भ्र्र्र्रष्ट, गुण्डा लुटेराहरुको झुण्ड भएकै कारण गणेशमा सिंहले पार्टी त्याग्नु प¥यो, कृष्ण प्रशाद भट्टराईले पार्टी त्याग्नु प¥यो । धनराज गूरुङ जस्ता नेताले टिकट नपाउने, प्रदीप पौडेल, कल्याण गुरुङ, चन्द्र भण्डारीहरुको पार्टीमा आवाज पहुँच र नेतृत्व नहुने हो भने कांग्रेस यस्तै रहन्छ ।
अनुसासनको कही कतै पालना नभएपछि सच्चा इमान्दार कार्यकर्ताले कसरी गर्व गर्लान । पार्टी सभापति बोल्दा कसैले सुनेन र देउवा जी ले ओ प्रकाश महत, ओ प्रकाश महत भन्नु प¥यो । अनुनय विनय गरेर मेरो कुरा सुन्नुस न भन्नु प¥यो । यो भन्दा बढी लज्जास्पद र अपमानित हुने दिन कुर्न नै शेर बहादुर देउवाको एक मात्र उदेश्य त पक्कै पनि होइन होला ।
तर एउटा कुरा त ग्यारेन्टीका साथ भन्छु कि गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, कल्याण गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, धनबहादुर गुरुङहरु जस्ता नेता भन्दा शेर बहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलमा भिजन र नेतृत्व क्षमता छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न त कुनै हालतमा सकिन्न । कपाल दारी फुलेका र झरेका पनि बिद्यार्थी नेताहरु, तरुण दलमा ५० नाघेका, नेतृत्वमा ७० नागेका, ठेक्का पट्टा र गुण्डागर्दी र घुसखोरहरु अग्रपंतीमा रहिरहने हो भने कांग्रेस इतिहास मात्र बन्छ ।
शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल जिलाई एक दिन वीपीका सपना राम्रारी पढाउँ । मरेका वीपीको नाम बजाएर कति बर्ष खाने ? सच्चा कांग्रेसीले घोत्लिएर सोचौँ ।